I-Twitter Analytics Ifikile | Martech Zone
I-Twitter Analytics Isifikile
NgoLwesihlanu, ngoJuni 12, i-2009 NgeSonto, Novemba 3, 2013 Douglas Karr
I-Clicky ilula ngendlela emangalisayo analytics package Eqhubeka nokungihlaba umxhwele ngokusetshenziswa kunoma iyiphi iphakethe lokubhuloga. Isici esijabulisayo esisanda kufakwa okunye ukuqapha okumangazayo kwe-Twitter:
Ukuhlanganisa izibalo ze-Twitter kwiphakheji yakho yezibalo kungumqondo omuhle. Umthetho engiwumisile wokungithola noma i-blog yami uthi:
i-douglaskarr NOMA "i-douglas ne-karr" noma "i-doug ne-karr" noma i-martech.zone
Inginikeza imininingwane yokuxhumana kwami ​​ku-Twitter noma kwabanye abantu abakhuluma ngami, kufaka phakathi ama-tweets aphelele, izimpendulo, izixhumanisi, ithoni evumayo, ama-retweets, imibuzo, ithoni engemihle, abathumeli, abemukeli kanye namathegi we-Hash ashiwo.
Tags: ngokuchofozaTwitterama-analytics e-twitter
Ubudlelwano Bamaklayenti Abathengisi Empilweni Yangempela
Kungani iBing Iwina Ukuseshwa Kwevidiyo ngeGoogle
Jun 12, 2009 ku-10: 11 PM
Jun 12, 2009 ku-11: 57 PM
Ngiyayithanda iClicky futhi iqinisekile ukuthi iyona engcono….
UJun 18, 2009 ngo-9: 40 AM
Iposi enhle kakhulu. Siyabonga ngolwazi kulokhu. Thina njengabakhangisi sidinga ukwazi ukubona okungaphezulu nje kokuthi i-twitter isayithi ephezulu ebhekisa lapho sibheka ama-analytics ewebhu weklayenti lethu. Ngijabule ukubona uClicky ehola kulokhu.